शारी*रिक सुन्दरता बढाउन चाहनुहुन्छ? यी खानेकुराको सेवान गर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
शारी*रिक सुन्दरता बढाउन चाहनुहुन्छ? यी खानेकुराको सेवान गर्नुहोस।
सुन्दर व्यक्तित्व भएका व्यक्तिको प्रभाव हरेक भेट वा परिस्थितिमा सका*रात्मक हुन्छ । सुन्दर व्यक्तित्वका लागी मानिसको शारीरीक वनावटसँगै उसको शारीरीक सुन्दरता पनि आवश्यक हुन्छ ।
शारी**रिक सुन्दरता भनेको मानि*सको अनुहार, आखाँ, छालाको सुन्दरता नै हो । आफूलाई सुन्दर पार्न मानिस सौन्दर्य सामाग्रीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने पनि गर्दछन् । तर हाम्रो भान्सामा पाइने केही सामा*ग्रीको प्रयोगले नै हाम्रो सुन्दरतामा ठूलो मद्दत पु¥याउँछ । आज हामी मानिसलाई सुन्दर बनाउन भान्सा भित्रै पाइने ती ९ कुराको जानकारी दिदैछौ, जसको प्रयो*गले हामीलाई सुन्दर बनाउन सहयोग गर्छ ।
भिटामिन ‘ए’ र ‘सी’ भरपूर मात्रामा पाइने टमाटरको सेवन गर्दा डण्डीफोर आउँदैन र छाला स्वस्थ रहन्छ । टमाटरको नियमित सेवनले छा**लामा चमक आउँछ । अनुहारमा टमा*टर लगाउँदा रौंका छिद्रहरु बन्द हुन्छन् ।
बहुउपयोगी गुण भएको अ*मला छालाका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । अमलाको प्रयोगले कपाललाई समेत फाइदा गर्दछ । नियमित अमलाको सेवन गर्दा छालामा चम्किलो हुनुको साथै कपाल लामो, बाक्लो र बलियो हुन्छ । चाउरीपनाको समस्यामा पनि अमला निकै उपयोगी छ ।
एन्टी एजिङययुक्त अ*दुवाको सेवनले वृद्ध अवस्थामा पनि छालालाई जवान झै बनाइराख्छ । बिहान–बिहान खाली पेटमा अदूवा खादाँ छाला आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ । अदुवाको रस अनुहारमा लगाएमा चाउरिएको छाला जवान झै देखिन्छ ।
एन्टी अक्सिडेन्ट गुणयुक्त ल*सुन खाँदा छाला चम्किलो हुनुका साथै सुन्दर देखिन्छ । दैनिक लसुनको एक टुक्रा चपाएर खाएमा छालाको चाउरिपन हट्छ । डण्डीफोर आउँदा लसुनलाई पिसेर अनुहारमा लगाएमा फाइदा पुग्छ ।
बहुउ*पयोगी गुणयुक्त कागतिको सेवन निकै लाभदायक मानिन्छ । भिटामिन ‘सी’ले भरीपूर्ण कागतीको सेवनले छाला स्वस्थ हुन्छ । कागतीको रस अनुहारमा लगाउँदा डण्डीफोर आउन छाड्छ र डण्डिफोरका दाग पनि हराएर जाने गर्दछन् । का**गतिको रस छाला र कपालमा लगाउदा दुवैमा चमक आउने गर्दछ ।
कतिपयलाई करेलाको तरकारी मन पर्दैन । तर करेला हाम्रो स्वास्थ्यका लागी भने बहुउपयोगी छ । प्रसस्त मात्रामा भिटामिन ‘ए’ पाइने करे**लामा एन्टिअक्सिेडेन्ट समेत पाइन्छ । तसर्थ सातामा २ पटक करेलाको तरकारी खाएमा यसले रगतलाई शुद्ध बनाउन मद्दत गर्छ । जसका कारण अनुहारमा डण्डीफोर आउनबाट रोक्छ र छालालाई स्वस्थ राख्छ ।
धेरैलाई पर्बलको तर**कारी मनपर्ने गर्दछ । तर यसको सेवन गर्दा हुने फाइदा बारे जानकारी नहुन सक्छ । पर्बलको नियमित सेवन गर्दा छालामा हुने एलर्जीबाट छुटकारा मिल्नुका साथै रगत सफाईमा समेत मद्दत पुग्छ । पर्बल खाँदा छालाका रोगहरु लाग्न पाउँदैन । दाद वा लुतो आउँदा पर्बलको पात पिसेर लगाउँदा निको हुन्छ ।
हरेक नेपा*लीको भान्सामा पाइने मेथीको सेवनले पेट सम्बन्धी रोगबाट छुटकारा दिलाउँछ । मेथी खाँदा पेट सफा हुनुका साथै छाला स्वस्थ र चम्किलो हुने गर्दछ । मेथी सेवन गर्दा छालाका रोगहरु लाग्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । मेथीको पात पि**सेर टाउको धोएमा कपाल बलियो र चम्किलो हुने गर्दछ ।
तरकारी, अ*चारमा मात्र होइन सलादका रुपमा समेत मुलाको प्रयोग हुन्छ । मुलाको नियमित सेवन गर्दा रगत शुद्ध हुन्छ तथा डण्डीफोर आउँदैन । यदि एक महिनासम्म लगातार मुला खाउमा डण्डीफोर आउँदा अनुहारमा बनेका दाग हराएर जान्छन् । मुलाको रस र तिलको तेलको मिश्रण बनाई टाउको मसाज गरेमा कपाल र्झन कम हुन्छ ।
Previous चामल सकिएमा पशल नजानुस् , नेकपा पोको बोकेर आउँछ: प्रधानमन्त्री ओली!
Next दुई महिने छोरोलाई कलेजो दिन चेन्नई पुगेका बाबुको प्रधानमन्त्रीलाई प*त्र!